Imaski, iLederhosen, kunye nebhiya ok kwiAir Canada eToronto entsha ukuya eMunich
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Imaski, iLederhosen, kunye nebhiya ok kwiAir Canada eToronto entsha ukuya eMunich
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Abantu baseBavaria baya kuvunyelwa ukuba bakhwele inqwelomoya ezayo kwi-Air Canada 77-9 Dreamliner moya kuzo zonke iiklasi ezi-3 ezinxibe iLederhosen okanye iDirndl.
I-Lederhosen yayenziwe kwaye ngokwesiko yenziwe ngezinto zesikhumba, isenza ukuba kube lula ukuyicoca nokususa ukungcola nothuli, emva kokusebenza nzima kosuku. I-Lederhosen, ke, yayihlala ingubo eklasini yokusebenza eyayineentsingiselo ezithile zenkcubeko nezentlalo kwiinkcubeko nakumazwe athetha isiJamani. Ziqhelekile eBavaria, ziphakamisa amashiya kulo lonke elaseJamani, kodwa kufuneka zithathelwe ingqalelo njenge-Ontario okanye iCanada iphela.
Ukulandela isibhengezo sikaRhulumente waseCanada sokuvula kwakhona imida yamanye amazwe ngoSeptemba 7, iAir Canada ityhile iinkcukacha ezongezelelweyo
yesicwangciso sayo sendiza yaseMunich (MUC) -Toronto (YYZ).
Ukukhululwa kwezithintelo kunceda abantu bamanye amazwe abagonywe ngokupheleleyo amayeza agonyelweyo nguRhulumente waseCanada (iModerna, Pfizer, AstraZeneca, kunye neJ & J) ubuncinci kwiintsuku ezili-14 ngaphambili kwaye abahlangabezana neemfuno ezithile zokungena eCanada kuhambo olungabalulekanga.
IJamani ikwavumela abantu baseKhanada abagonywe ngokupheleleyo okanye abo banako ukubonisa uvavanyo lwe-COVID olusebenzayo lokungena eJamani nakwindawo yaseSchengen.
Ukunxiba iLederhosen yamanenekazi kunye neDirndl yamanenekazi xa ehamba ngenqwelomoya engayeki ukusuka kwiBavaria Capital City yaseMunich ukuya eToronto kuyakwenzeka ngaphandle kokuphakamisa amashiya ngamaJamani kwezinye iidolophu ezingaphandle kweBavaria njengeFrankfurt.
Abantu abaninzi e-Ontario, Canada, bayayithanda i-Okthobha kwaye banemifanekiso yamaJamani enxibe ii-dirndls, i-lederhosen, kunye neminqwazi yaseJamani, ebonwa njengempahla yaseJamani yase-Bavaria e-Okthobha.
ILufthansa ibidibanisa iJamani neKhanada ngeenqwelomoya ezingapheliyo, kwaye ukongezwa kweqabane leStar Alliance iAir Canada ukuphinda uqalise indlela yayo ukusuka eMunich ingayeki ukuya eToronto kuya kongeza kolu lonwabo lubalulekileyo kunye nentengiso yeshishini.
EMunich, eFrankfurt, nakwezinye izikhululo zeenqwelo moya zaseYurophu ezinje ngeVienna, iZurich, iAmsterdam, iBrussels, neParis zinxibelelana neCanada neenqwelomoya ezithe ngqo nezidibanisa enye.
Iinqwelomoya kunye nezikhululo zeenqwelo moya kunye nemanyano eyahlukeneyo ikhuphisana kule marike. Ukongeza, iindleko eziphantsi kunye neetshatha ezinje ngeCondor zikhonza imakethi yaseJamani yaseCanada kwizikhululo zeenqwelomoya ezahlukeneyo eJamani nakwamanye amazwe angabamelwane.
Isikhululo senqwelomoya esiphambili eJamani sihlala sikhona IFRAPORT (eFrankfurt), kodwa iMunich kuMazantsi eYurophu kuRhulumente waseBavaria yindawo yesibini ebaluleke kakhulu ukudibanisa iJamani nehlabathi
Phantse zonke izikhululo zeenqwelo moya zinxibelelene nenkqubo yoQeqesho lwe-ICE, ivumela ukudibanisa izixeko ezikhulu zaseJamani kunye nezikhululo zeenqwelo moya ngaphakathi kweeyure kunye nesantya esingaphezulu kwe-200 km / h.
“Njengokuba izithintelo zohambo zihamba lula kwihlabathi lonke, sizibophelele ekwakheni uthungelwano lwamazwe aphesheya kwaye siqhubeke njengophethe umhlaba odibanisa umhlaba neCanada. Njengabantu baseYurophu abanomdla wokuphinda babuyele eCanada, sikulungele ukudibanisa abathengi neentsapho zabo kunye nabahlobo, utshilo uJen-Christophe Hérault, uManejala weZentengiso waseJamani, Switzerland, Austria naseMpuma Yurophu eAir Canada.
Njengazo zonke iinqwelomoya, kwezi ntsuku imincili yeAir Canada kunye neMunich Airport isekwe kwimeko yanamhlanje.
Ke ngoko, iAir Canada yongeze kupapasho lwayo loonondaba: “Qaphela ukuba ishedyuli yorhwebo yeAir Canada inokuhlengahlengiswa njengoko kufuneka ngokusekwe kwi-travory ye-COVID-19 kunye nezithintelo zikarhulumente. Abakhweli banoxanduva lokuqinisekisa ukuba badibana nabo bonke
iimfuno zokungena zikarhulumente, kubandakanya nokugcina amaxwebhu okuhamba achanekileyo, ii-visa, nasiphi na isatifikethi sezempilo esifunekayo, nazo zonke ezinye iimfuno zokufaneleka kuzo naziphi na iinqwelomoya abazithengayo. Ngolona lwazi lwanje, nceda undwendwele indawo yethu yoLwazi okanye iwebhusayithi ye-IATA yeTimatic. Umgaqo wohambo: Bhukisha ngokuzithemba.
Iimfuno zikarhulumente zingatshintsha ngaphandle kwesaziso esincinci